Isiguquli semali samakhompyutha namadivayisi eselula | Izindaba zamagajethi
Thola isiguquli semali esiningi samadivayisi ahlukile
Isiguquli semali amaningi singasiza kunoma ngubani futhi ngesikhathi esithile, uma singabanye balabo bantu abavakashela izitolo ezahlukahlukene eziku-inthanethi ukuthola uhlobo oluthile lomkhiqizo. Njengoba uKhisimusi useduze kakhulu, lesi simo sikhule kakhulu ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba, njengoba ukuvakashela lolu hlobo lwendawo kuzosiphoqa ukuthi sibhekane nezimali ezahlukahlukene, okungenzeka ukuthi asizazi ngokuphelele.
Ngoba i-euro, idola, iphawundi sterling nezinye izimali ezimbalwa zivame ukwehluka nsuku zonke (futhi kwesinye isikhathi njalo ngomzuzwana), akunakwenzeka ukwazi izinga lokushintshanisa phakathi kwalowo nalowo kubo, yingakho uhlobo oluthile lwesiguquli izinhlamvu zemali eziningi; kulesi sihloko sizokhuluma ezinye izindlela ezimbalwa njengokuhlanganiswa, lapho ezinye ezinikezelwe kumadivayisi eselula e-Android namanye amakhompyutha azobhekiswa ngqo.
1 Multiple lwemali Converter kumakhompyutha wakho
2 Isiguquli semali eminingi se-Android
Multiple lwemali Converter kumakhompyutha wakho
Kuyindlela yokukusho, ngoba empeleni sizoncoma kule ngxenye yokuqala yendatshana ngokuguqula izinhlamvu zemali eziningi, kungohlelo lokusebenza lwewebhu kanye negajethi; esimweni sokuqala, uhlelo lokusebenza lwewebhu lungasetshenziswa kunoma yiluphi uhlobo lwekhompyutha yomuntu siqu, ngidinga kuphela isiphequluli esihle se-Intanethi, ngokufanayo kungaba iGoogle, iMozilla Firefox, i-Internet Explorer, i-Opera noma okunye okuthandayo. Inqubo ezolandelwa imi kanje:
Sifaka isicelo sewebhu «Currency Converter», isixhumanisi ozosithola ekugcineni kwendatshana.
Sizothola isikhombimsebenzisi esibonakalayo okulula ukusibona ngumsebenzisi.
Ngokukhetha «Kusuka»Kufanele silungiselele uhlobo lwemali inani lalo esilaziyo.
Ngokukhetha «Ngakusasa»Esikhundleni salokho kufanele sibeke uhlobo lwemali esifuna ukuyiguqula.
Ku "Inani»Esikhundleni salokho kuzofanele sibeke inani lomsebenzi esifisa ukuwaphenya.
Kulesi sikhombimsebenzisi esifanayo sohlelo lokusebenza lwewebhu singabona ezinye «Imicibisholo emibili»Ama-Verticals, azosisiza ukuthi siguqule uhlobo lwemali« yomthombo-oya khona ».
Ukuba isicelo sewebhu, isiphakamiso esishilo singenziwa kunoma yiluphi uhlobo lwesikhulumi, kungaba yiWindows, iMac noma iLinux. Okunye okulandelayo esizokubalula kukhethekile kuWindows 7, uhlelo olusebenzayo lweMicrosoft oluza ukuhlanganisa amaGajethi aziwayo nokuthi njengamanje, lezi zinto azikho kuWindows 8. Ukuze ukwazi ukusebenzisa le nto, kuphela:
Sidinga ukuchofoza ngenkinobho yesokudla yegundane lethu kwideskithophu.
Kusukela kokukhethwa kokuqukethwe okukhonjisiwe, sikhetha leyo ethi Igajethi.
Iwindi elisha lizovela namagajethi ambalwa, lapho sizokhetha khona elithi "Imali".
Le gajethi izobekwa ngokukhethekile ohlangothini olungakwesokudla kwideskithophu yethu yeWindows, kufanele umsebenzisi ukwenza ngezifiso uhlobo lwemithombo nendawo yemali; amanani akhonjiswa lapho azobuyekezwa ngesikhathi sangempela, lokhu kube inzuzo enkulu futhi kube lula kulabo abahlala kulo mhlaba wezezimali.
Isiguquli semali eminingi se-Android
Akunandaba noma ngabe unefoni ephathekayo noma ithebhulethi ye-Android, esitolo sokudlala seGoogle ungakuthola lokhu isiguquli izinhlamvu zemali eziningi, kunezindlela ezi-2 ezinhle zokubamba.
I-interface yalolu hlelo lokusebenza iyathandeka impela, lapho kunezinketho zokubeka imali yomthombo kanye nemali yendawo oya kuyo.
Isithombe esisibeke ngaphezulu sibhekisa kolunye lwalezi zinhlelo zokusebenza ze-Android, okungenzeka ukuthi luphelele kakhulu ngenxa yokuhlinzekwa kwethileyi elincane elingeziwe, lapho kunezinombolo ongazithayipha kalula beka inani ofuna ukulithola ngohlobo lwemali oluhlukile. Kunoma ikuphi, noma ngabe uluphi uhlelo lwe-Android onquma ukulifaka kudivayisi yakho yeselula, kungashiwo ukuthi lezi ezinye izindlela ezi-2 zinganelisa noma yisiphi isidingo sokwazi (ukwaziswa) ngokwenzeka emhlabeni nakuzo zonke lezi zimali.
Imininingwane engaphezulu - Qalisa izinhlobo ezahlukahlukene zezinhlelo zokusebenza ku-Google Chrome
Amawebhusayithi - Isicelo seWebhu, Isibali semali, Isiguquli semali
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Thola isiguquli semali esiningi samadivayisi ahlukile
Ukwenza imisebenzi ebaluleke kakhulu ku-YouTube
Indlela elula yokwenza idiski ebonakalayo kuWindows